Ukuhanjiswa okokuqala kweApple TV 4K kunye neApple Watch Series 3 kuqala | Ndisuka mac
Ngokucacileyo ikwimodeli ezintsha ze-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus yokuba abasebenzisi bokuqala babebeke uLwesihlanu odlulileyo. Zonke iimveliso ezongezwe nguApple kwikhathalogu yemveliso ngaphandle kwe-iPhone X entsha, baqalile ukuhanjiswa kwiinkampani zokuhambisa ezinjenge-UPS.
Oku kuthetha ukuba abanye abasebenzisi ababeke iiodolo kwangolo suku banokufumana iimveliso kancinane ngaphambi kukaSeptemba 22, umhla ekulindeleke ukuba baqale ukufumana ngawo. Kwelinye icala kunjalo into eqhelekileyo ukuba ii-odolo zifunyenwe kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba zilindelwe, kodwa akwenzeki kuzo zonke iimeko.
Uninzi lwe-idevice ethunyelweyo luvela eShanghai, ke kusengqiqweni ukuba banokulibazisa imihla yokuhanjiswa kude kube kwangoloo Lwezihlanu kucwangcisiweyo. Okucacileyo kukuba abo bathenga entsha I-Apple TV 4K, Apple Watch Series 3 okanye i-iPhone 8 Kwakhona baneveki engaphambi kokundwendwela amaphepha amaninzi.
Ukuba ungomnye wabasebenzisi bokuqala abathenga imveliso kwivenkile ekwi-intanethi ye-Apple "inombolo yokulandelela" yakho inokuba kweli nqanaba elilandelayo ngoku, ke musa ukuthandabuza ukujonga kwaye wabelane nathi ngomhla wokuhanjiswa oqikelelweyo kunye nento oyithengileyo. Ndiyathemba ukuba le veki iza kudlula ngokukhawuleza kubo bonke abathengi abanethamsanqa kwaye ngakumbi ukuba kunokwenzeka ukuba ifike kancinci ngaphambi komhla obucwangcisiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukuhanjiswa okokuqala kweApple TV 4K kunye neApple Watch Series 3 kuqala
Yenza iifoto zakho ngokwezifiso nangazo naziphi na izihluzo zeDeppStyle